Ny mpitsidika UK any Costa Rica dia nitombo 2.5% tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2018
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny mpitsidika UK any Costa Rica dia nitombo 2.5% tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2018
Ny antontan'isa farany navoakan'ny birao fizahan-tany Costa Rica (TIC) dia nanambara fa mpitsidika 40,907 avy any Angletera no tonga tany Costa Rica tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2018 - maneho fiakarana 2.5% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2017. Ity dia mitohy ny fitomboana dia taratry ny firongatry ny firongatry ny mpitsidika UK any Costa Rica izay hita tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nohamafisin'ny fanombohana ny sidina mivantana BA avy any Londres tamin'ny aprily 2016.
Ny antontan'isa farany navoakan'ny Birao fizahantany Costa Rica (TIK) dia nanambara fa mpitsidika 40,907 avy any Angletera no tonga tany Costa Rica tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2018 - nampiseho fiakarana 2.5% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2017.
Ity fitomboana maharitra ity dia taratry ny firongatry ny firongatry ny mpitsidika UK any Costa Rica izay hita tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny sidina mivantana BA avy any London tamin'ny aprily 2016.
Ny tarehimarika farany dia mametraka ny tsenan'i UK ho tsena loharano faharoa lehibe indrindra any Costa Rica any Eropa, izay nihoaran'i Frantsa fotsiny, izay nahazo mpitsidika 44,843 tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona tamin'ity taona ity. Ny firenena eropeana hafa rehetra koa dia nahita fitomboan'ny isan'ny mpitsidika, anisan'izany i Alemana (+6.8) sy i Espana (+ 1.6%).
Ny tsena Irlandey koa dia nahita fiakarana tsara tamin'ny tapany voalohany tamin'ity taona ity. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2018, dia mpitsangatsangana Irlandey 2,400 no nitsidika an'i Costa Rica, izay nampiseho fiakarana 17% mahavariana raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa.
Amin'ny isa manerantany, Costa Rica dia niarahaba mpitsidika 1,661,145 2018 1.7 manerantany nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2017, fiakarana XNUMX% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny XNUMX.
Miorina eo anelanelan'i Nikaragoa sy Panama, Costa Rica dia manolotra biby marobe, zaridaina ary traikefa hahafahana mankafy ny tsirony rehetra - manomboka amin'ny fihaonana madiodio sy sokatra mankamin'ny ala mando, ala mikitroka ary moron-dranomasina idyllic. Ny kaonty 0.03% fotsiny amin'ny velaran'ny tany, Costa Rica dia misy 5% amin'ny zava-manan'aina an'izao tontolo izao, ary 26% ny faritany misy azy no arovana.
Ny departemantam-panjakana amerikana dia namerina nanolo-kevitra ny toro-hevitra momba ny dia any Kioba ho an'ny haavo 2
Las Vegas 'Bellagio dia miantso ny filoha lefitry ny varotra vaovao